Corporate Blogging: Top Ajụjụ iri sitere na ụlọ ọrụ | Martech Zone
Ọ bụrụ na enwere otu ihe na - adọghachi gị na eziokwu, ọ na - ezukọ na azụmaahịa mpaghara iji kwalite ịde blọgụ na mgbasa ozi mmekọrịta.
Ohere, ma ọ bụrụ na ị na-agụ nke a, ị na-aghọta ịde blọgụ, na-elekọta mmadụ media, na-elekọta mmadụ ibe edokọbara, search engine njikarịcha, wdg the na isịneke!
N'èzí 'blogoshere', ụlọ ọrụ America ka na-agba mgba na ịchọta ngalaba aha ma tinye ibe weebụ. Ha bụ n'ezie! Ọtụtụ ka na-achọ Classifieds, Yellow Pages na Direct Mail iji nweta okwu ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere ego ahụ, enwere ike ibinyere n’ime Radio ma ọ bụ TV. Ndị a bụ ndị na-ajụ mmụọ dị mfe, ọ bụghị ya? Naanị tinye akara, ebe, mgbasa ozi… wee chere ka ndị mmadụ hụ ya. Mba nchịkọta, peeji nyochaa, ndị ọbịa pụrụ iche, ọkwa, permalinks, pings, trackbacks, RSS, PPC, engines ọchụchọ, ogo, ikike, ntinye - naanị olile anya ma kpee ekpere mmadụ na-ege ntị, na-ele ma ọ bụ na-ele ụlọ ọrụ gị anya.
Ihe weebụ a bụ ọ bụghị dị mfe maka ahụkarị ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị m, kwụsị site na mpaghara Nzukọ Weebụ maka ndị mbido, Nzukọ Nzukọ regionalzụ ahịa mpaghara ma ọ bụ ihe omume Chamberlọ mercelọ Ahịa. Ọ bụrụ n’ezie ịchọrọ ịma aka gị, jiri ohere ahụ kwuo okwu. Ọ bụ ihe mmeghe anya!
Ajụjụ iri dị na ịde blọgụ sitere na ụlọ ọrụ:
Kedu ihe ịde blọgụ?
Gịnị mere anyị kwesịrị Blog?
Kedu ihe dị iche n'etiti ịde blọgụ na weebụsaịtị?
Kedu ihe dị iche na ịde blọgụ na ebe nrụọrụ weebụ?
Ugboro ole ka anyị kwesịrị ime ya?
Ànyị kwesịrị ịnabata blog anyị na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ jiri ngwọta akwadoro?
Gịnị banyere okwu na-adịghị mma?
Nwere ike karịrị otu blog?
Kedu ka anyị si achịkwa akara anyị?
N'ịbụ onye nọ n'oké ọrụ ahụ, ọ tụrụ m n'anya mgbe mbụ m nụrụ ajụjụ ndị a. Onye ọ bụla amaghị maka ịde blọgụ? Ahịa ọ bụla agbanyeghị mkpọrọgwụ na mgbasa ozi mmekọrịta m dịka m si?
Ndị a bụ Nzaghachi m:
Kedu ihe ịde blọgụ?Blog dị mkpụmkpụ maka weblog, akwụkwọ akụkọ n'ịntanetị. Dịka, a na - enwe blọọgụ nke edepụtara na nke a na - ebipụta ugboro ugboro. Ozi ọ bụla na-enwekarị adreesị weebụ pụrụ iche ebe ị nwere ike ịchọta ya. Ederede ọ bụla nwere usoro ịza ajụjụ iji rịọ nzaghachi site n'aka onye na-agụ ya. A na-ebipụta blọọgụ site na HTML (saịtị ahụ) na RSS nri.
Gịnị mere anyị kwesịrị Blog?Blọọgụ nwekwara teknụzụ na-enweghị atụ nke na-eme ka teknụzụ njin ọchụchọ na nkwukọrịta na ndị ọzọ na-ede blọgụ. A na-ele ndị na-ede blọgụ mara mma anya dị ka ndị isi echiche na ụlọ ọrụ ha - na-enyere aka ịkwalite ọrụ ha ma ọ bụ azụmaahịa ha. Blọọgụ na-egosipụta nghọta na nkwukọrịta - na-enyere ndị azụmaahịa aka ịmekọrịta mmekọrịta n'etiti ndị ahịa ha na atụmanya ha.
Kedu ihe dị iche n'etiti ịde blọgụ na weebụsaịtị?Ọ na-amasị m iji weebụsaịtị tụnyere ihe ịrịba ama na-abụghị ụlọ ahịa gị na blọọgụ gị bụ okwukwe aka mgbe onye na-elekọta ya na-abanye n'ọnụ ụzọ. Ebe nrụọrụ weebụ 'Broshuọ' dị mkpa - ha na-edozi ngwaahịa, ọrụ gị, akụkọ ụlọ ọrụ gị, ma zaa ozi niile dị mkpa mmadụ nwere ike ịchọrọ gbasara ụlọ ọrụ gị. Blog bụ ebe ị na-ewebata ụdị onye ọrụ gị dị. E kwesiri iji blọọgụ ahụ kuziere, kwurita okwu, meghachi omume na nkatọ, kpalie ịnụ ọkụ n'obi ma kwado ọhụụ nke ụlọ ọrụ gị. Ọ na-abụkarị obere obere iwu, anaghị egbu maramara, ma na-enye nghọta onwe - ọ bụghị naanị ahịa ahịa.
Kedu ihe dị iche na ịde blọgụ na ebe nrụọrụ weebụ?Ikekwe, ihe kachasị gbasara blọọgụ bụ na onye na-ede blọgụ na-ezi ozi, ọ bụghị onye ọbịa. Otú ọ dị, onye ọbịa ahụ ga-emeghachi omume na ya. Ebe nrụọrụ weebụ na-enye onye ọ bụla ohere ịmalite mkparịta ụka ahụ. M na-ahụkarị ihe mgbaru ọsọ nke abụọ dị iche iche. IMHO, forums anaghị edochi blọọgụ ma ọ bụ na - ma ahụla m mmejuputa nke ọma.
Ego ole ka ọ na-eri?Kedu ka free ụda? Enwere ngwa ntinye ederede nke anyi n'ebe a - ma nke akwadoro na ngwanrọ ị nwere ike iji na blọọgụ gị. Ọ bụrụ na ndị na-ege gị ntị buru ibu, ịnwere ike ịbanye na ụfọdụ nsogbu bandwid nke nwere ike ịchọ ka ị zụta n'ime ngwungwu nnabata ka mma - mana nke a dị ezigbo mma. ịde blọgụ atụmatụ na iwekota ha na gị na broshuọ saịtị ma ọ bụ ngwaahịa, ezie! Ha abụọ nwere ike ịja ibe ha mma nke ọma!
Ugboro ole ka anyị kwesịrị ime ya?Frequency adịghị mkpa dị ka agbanwe agbanwe. Fọdụ ndị folks na-ajụ ugboro ole m na-arụ ọrụ na blọọgụ m, echeghị m na m bụ ahụkarị. M na - emekará »‹ 2 posts kwa á »is bá» is na mgbede na ndá »‹ á »zá» bá »a a timed post (prewritten) na-ebipá» during ta n'ụbọchị. Kwa mgbede na ụtụtụ m na-etinyekarị 2 ruo 3 awa na-arụ ọrụ na blọọgụ m na mpụga ọrụ m. Naanị ịghọta na ozugbo ị debere atụmanya site na iji ozi oge niile na ị kwesịrị ijide atụmanya ndị ahụ, ma ọ bụghị na ị ga-atụfu ndị na-agụ akwụkwọ.
Ànyị kwesịrị ịnabata blog anyị na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ jiri ngwọta akwadoro?Ọ bụrụ na ị bụrụla onye na-agụ m ogologo oge, ị ga-amata na mụ onwe m na-achọ ịnabata blọgụ nke m n'ihi mgbanwe ọ na-enye m na mgbanwe mgbanwe, na-agbakwunye atụmatụ ndị ọzọ, na-agbanwe koodu ahụ n'onwe m, wdg. ndá »‹ posts, ezie na, kwadoro ngwọta n'ezie weliri mmanya. Nwere ike ịrụ ọrụ ugbu a na azịza akwadoro, nwee aha ngalaba nke gị, hazie isiokwu gị ma gbakwunye ngwaọrụ na atụmatụ ihe dịka yana ị na-anabata nke gị. Blogger ma ngwa ngwa kpaliri ya na ngwọta a kwadoro WordPress. Achọrọ m 'ịnweta ngalaba m' ma hazie saịtị ahụ n'ihu. Agaghị m akụda onye ọ bụla - ọbụlagodi ụlọ ọrụ - site na iji ngwọta akwadoro dị ka Vox, TypePad, Blogger or WordPress naanị ịmalite na nnwale.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị dị oke njọ, aga m enyocha ụfọdụ nchịkọta Blogging 2.0 dị ka Ngwakọta!
Compendium Software bu ezigbo ndi enyi m abuo, Chris Baggott na Ali Sales bidoro komputa komputa, ma burukwa mmalite nke ntaneti.
Gịnị banyere okwu na-adịghị mma?Fọdụ ndị folks kwenyere na ịnweghị ike ịnwe blọọgụ eziokwu ma ọ bụrụ na onye ọ bụla na onye ọ bụla nwere ike ikwu okwu na ya - ọbụlagodi na ọ bụ ụgha ma ọ bụ mkparị. Nke a bụ naanị nzuzu. Nwere ike ịpụpụ ihe niile - mana ị na-efunahụ onye ọrụ bara uru mepụtara! Ndị na-aza ajụjụ na blọọgụ gị na-agbakwunye ozi, akụrụngwa, na ndụmọdụ - na-agbakwunye ma uru ma ọdịnaya.Cheta: Search engines hụrụ ọdịnaya. Ihe ndị mepụtara onye ọrụ dị oke mma ebe ọ bụ na ọ naghị efu gị ihe ọ bụla mana ọ na-enye ndị na-ege gị ntị ọtụtụ ihe! Usoro iwu gị nwere ike ịdị mkpụmkpụ ma dịkwa mfe, Ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu - anaghị m eziga okwu gị! Nzaghachi na-adịghị mma na-arụ ọrụ nwere ike ịgbakwunye na mkparịta ụka ahụ ma gosi ndị na-agụ akwụkwọ gị ụdị ụlọ ọrụ ị bụ. M na-akwado ihe niile ma ndị kasị mkpari ma ọ bụ na SPAM. Mgbe m hichapụ okwu - M na-ezigara onye ahụ ozi ma gwa ha ihe kpatara ya.
Nwere ike karịrị otu blog?Kpamkpam! Inwe otu na ndi na-ede blọgụ n'ime nke ọ bụla dị iche iche. Gini mere iji tinye nsogbu nile n’aru otu onye? Nwere ụlọ ọrụ talent niile - tinye ya n'ọrụ. Echere m na ọ ga-eju gị anya na ndị gị na-ede blọgụ kachasị ike na nke kachasị ewu ewu (M ga-adị njikere ịkụ nzọ na ha agaghị abụ ndị ahịa gị!)
Kedu ka anyị si achịkwa akara anyị?80,000,000 blọọgụ n'ụwa na ọtụtụ narị puku kwuru kwa izu… maa gịnị? Ndị mmadụ na-ede blọgụ gbasara gị. Mepụta a Google Alert maka ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị ma ị nwere ike ịchọpụta na ndị folks na-ekwu maka gị. Ajụjụ bụ ma ịchọrọ ha ijikwa ika gi ma obu ị gingde blọgụ na-enye ọkwa nghọta na ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị enwe ntụsara ahụ. Anyị na-ekwu na anyị chọrọ ịdị na-egosipụta nghọta, anyị chọrọ ịgba ume nghọta, mana ụjọ na-atụ anyị maka ya. Ọ bụ ihe ụlọ ọrụ gị ga - emerịrị. N'eziokwu, n'eziokwu, ndị ahịa gị na atụmanya gị amatala na ị zughi oke. Ga-emehie ihe. Ga-emehie ihe na blọọgụ gị. Mmekọrịta ntụkwasị obi nke gị na ndị ahịa gị na atụmanya gị ga-enwe ga-emeri ihe ọ bụla ị na-eme.
Tags: ịde blọgụịde blọgụ ajụjụngọngọbrandblog ụlọ ọrụụlọ ọrụ ịde blọgụụlọ ọrụ ịde blọgụ maka dummiesego ole ka ịde blọgụ na-efuugboro ole ka anyị kwesịrị Blogna-ekwu okwu ọjọọanyị kwesịrị ịnabata blog anyịkedu ihe ịde blọgụkedu ihe dị iche na etiti blọgụ na weebụsaịtịgịnị mere anyị ga-Blog
Jul 19, 2007 na 2:19 PM
Gingde blọgụ adịghị mfe dịka m chere na ọ bụ, Enwere m ajụjụ ajuju, esi m Venezuela, ịde blọgụ ebe a amachaghị nke ọma dị ka yahoo ma ọ bụ Google… kama ọ ga-abụ ezigbo ahịa n'ọma di na nwunye. ugbu a, m na-amalite na blog dị mfe http://bajaloads.com (lolz m na ndepụta ego), ọ ga-amasị m ịbawanye ika m BajaLoads
(Baja = ala na Spanish)… na-eme blọọgụ akụkọ na Spanish, nwanne m nwanyị ga-agba ọsọ na blog, nwa agbọghọ m ọzọ, na otu enyi m ọzọ… ha niile na Spanish… na n'otu oge m mee ka ha mara na mahadum, na akara… n'ebe nile na-enweghị spamming, ajụjụ bụ nke a: m ga-enweta a mma SEO ogo ma ọ bụrụ na m biputere kwuru dị ka nke a na blog posts na-amasị m? (ebe m ga-enye url nduzi m ma ọ gosipụtara na aha postname m)
Jul 19, 2007 na 2:30 PM
ọmarịcha ọkwa. Ọ na-atụ m n'anya mgbe niile na enweghị nghọta na ọha mmadụ. Mgbe ị na-egwu mmiri na ọkara, ị na-eche na onye ọ bụla maara banyere ya. ee ee, o nwere ike bụrụ nnukwu ụjọ maka ndị na-amaghị ihe pere mpe na ntanetị, hapụ ịde blọgụ. agbanyeghị, nyocha na-enye aka na azụmaahịa na ịde blọgụ.
Jul 19, 2007 na 10:02 PM
I cant see my comment, gini kpatara nke a doug ??
Jul 19, 2007 na 10:34 PM
Yiri ka ihe na-adighi ike na ihe a… M na-aru oru na ya… hmmm.
Jul 19, 2007 na 11:17 PM
Ya mere, echegbula, M na-ekwu okwu banyere eke nke m "Corporation" na Venezuela, ebe blọọgụ na-adịghị mma maara ebe a 😛
Anọ m na-eche na ịmepụta ngalaba ngalaba dịka:
Ebe ha niile bụ nwanne m nwanyị, enyi m nwanyị na enyi ya gbara m niile (agaghị m akwụ ha ego ahụ ebe ọ bụ na m ga-erite uru na US $ na m ga-akwụ ụgwọ na Ven- bolivares).
Ajụjụ a bụ nke a, - M ga - emeziwanye ọnọdụ SEO ma ọ bụrụ na m na - ekwu na blọọgụ a ma ama dịka nke a? (ebe o bu na m ga-ekenye url m)
Ọzọkwa m nọ n'ahịrị iji tụọ gị :-D, n'agbanyeghị na mgbe m weere ụfọdụ ndụmọdụ ị nyere ndị na-ede blọgụ ndị ọzọ,
udo bro 😀